လင်္ကာတမန်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာဆရာတော်များ၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ (2016)ခုနှစ် မဂ္ဂဇင်းအဖုံးကို ဒမ္ဘူလတောင်ဓာတ်ပုံဖြင့် ပြုလုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ ဒမ္ဘူလတောင်ပုံကို Cover Photo အဖြစ်အသုံးပြုမည်ဆိုလျင် တောင်တော်ကြီး၏သမိုင်းကြောင်းကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် အဖြစ် ထည့်ကြရန်ကိုလည်း သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဒမ္ဘူလတောင်သမိုင်းကို ရေးသားရန် တာဝန်ကျလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် အထူးထင်ရှားပြီး သမိုင်းတန်ဖိုးကြီးမားသော ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် များစွာရှိပါသည်။ ဒမ္ဘူလတောင်သည် သီရိလင်္ကာလူမျိုးတို့၏ ပထမဆုံး ကျောက်ဆစ်အနုပညာ­လက်ရာကို ထိမ်းသိမ်းပြသထားသည့် နေရာဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဘာသာရေးနှင့်ဆက်စပ်­သည့်နေရာဖြစ်သော်လည်း အမှန်စင်စစ် သီရိလင်္ကာ၏ရှေးခေတ်နိုင်ငံရေး ပုံရိပ်များကို ဒမ္ဘူလတောင်­သမိုင်းမှတ်တမ်းများက ညွှန်ပြလျှက်ရှိပါသည်။
ဤသို့ဆိုသဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ ခေတ်ဦးပိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်စပ်သော မင်းရေးမင်းရာ­တ­ချို့ ကို ဖော်ပြရန်သင့်ပါသည်၊၊ ၀င်္ဂရာဇ်မင်းမျိုးဆက်၊ ၀ိဇယမင်းမှစတင်အခြေတည်ခဲ့သော ‘တမ္ဗပဏ္ဏိ­နိုင်­­ငံ­­တော်­’ကို (B.C.3)ရာစုတွင် ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်း နန်းတက်ခဲ့ပါသည်။ တတိယသင်္ဂါယ­နာတင်­ပွဲ­အပြီး သာသနာပြုကြွတော်မူလာသည့် အရှင်မဟိန္ဒ ဦးဆောင်သော- အရှင်အိဋ္ဌိယ၊ အရှင်­ဥတ္တိယ၊ အရှင်­သမ္ဗလ၊ အရှင်ဘဒ္ဒသာလ၊ သုမနသာမဏေ နှင့် ဘဏ္ဍုကဥပသကာ-တို့အဖွဲ့၏ သာသ­နာ­ပြု­မှု­ဖြင့် ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်းနှင့် ပြည်သူ၊ ပြည်သာများပါ ရတနာသုံးပါးကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီး၊ ထေရ­၀ါ­ဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ကြီး စတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်းကြီးနှင့် အရှင်မဟိန္ဒတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် နိုင်ငံတော်ကြီးတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော် နေလပမာထွန်းတောက်ခဲ့ပါသည်၊၊ သံဃာတော်များသီတင်းသုံး ရန် ကျောင်းတိုက်ကြီးများ၊ စေတီတော်ကြီးများကို နိုင်ငံအနှံ့တွင်တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်ကို ယနေ့တိုင် ဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်းကြီးတွင် ညီအကိုအရင်း (၁၀)ယောက်နှင့် နှမတော်(၂)ပါး ရှိပါသည်၊၊ မင်းကြီးနှင့် အနုလာဒေ၀ီမိဖုရားတို့တွင် ထီးမွေနန်းလျာမထွန်းကားသည့်အတွက် ညီတော်များမှ နန်း­မွေကို ဆက်ခံခဲ့ကြပါသည်၊ ညီတော်သုံးပါးဖြစ်သည့် တတိယနန်းဆက်-‘သူရတိဿမင်း’­လက်­ထက်­တွင် အနုရာဓပူရထီးနန်းကို ဘာသာခြားဖြစ်သောကျေးကုလားမင်းမှ လုယူပြီး၊ နန်းသိမ်း­ခံ­လိုက်­ရပါသည်။
ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်းကြီး၏ အခြားညီတော်တပါးဖြစ်သော ‘မဟာနာဂမင်းသား’သည် လက်ရှိ-သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏တောင်ပိုင်း ‘ရောဟနဒေသ’တွင် နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပြီး ထီးနန်းစိုး­စံခဲ့­ပါသည်။ မဟာနာဂမင်းကြီး၏သားတော် ‘ဂေါဓာဘယမင်းသား’မှ နန်းမွေကိုဆက်ခံခဲ့ပါသည်၊ ဂေါဓာ­ဘ­ယမင်းကြီးတွင် ‘ကာက၀ဏ္ဏတိဿ’အမည်ရှိသားတော်တစ်ပါး ဖွားမြင်ပြီး၊ ကလျာဏီ­တိဿမင်း၏ သ္မီး­တော်‘၀ိဟာရ­ဒေ၀ီ’­ကို မိဖုရားမြှောက်ကာ ဖခင်၏ထီးနန်းအမွေကို ဆက်ခံခဲ့ပါသည်။ (မူကွဲ-ကာက­၀ဏ္ဏ­တိဿ=က၀ံတိဿ)။
ကာက၀ဏ္ဏတိဿမင်းနှင့် ၀ိဟာရဒေ၀ီမိဖုရားတို့မှ-ဒုဋ္ဌဂါမဏိ နှင့် သဒ္ဓါတိဿ-ဟူသောမင်း­သား­နှစ်ပါး ကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဦးကြီးတော်-ဒေ၀ါနံပီယတိဿမင်း တည်­ထောင်­ခဲ့­သော အနုရာ­ဓပူ­ရနန်းတော်ကြီးကို ဘာသာခြားမင်းများ အုပ်ချုပ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထေရ­၀ါ­ဒ­ဗုဒ္ဓ­သာသ­နာတော်သည်လည်း မင်း၏ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့မှုကို မရသည့်အပြင် ဖျက်ဆီးခံနေ­ရသည့်­အချိန်­ဖြစ်သောကြောင့် တိမ်ဖုံးအုပ်သည့် လပမာဖြစ်နေခဲ့ရပါသည်။
ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းသားသည် ရဲစိတ်ရဲမာန်ပြင်းထန်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓသာသနာကိုလည်း အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ကြည်ညိုသူဖြစ်၍ အနုရာဓပူရထီးနန်းကို ဘာသာခြားမင်းများထံမှ တိုက်ယူပြီး၊ နိုင်ငံနှစ်ခုကို တစု­တည်း­ပြုချင်သည့် ဆန္ဒရှိခဲ့ပါသည်။ စစ်သည်ဗိုလ်ပါ အလုံအလောက်ကို စုဆောင်းမိသည်နှင့် ဖခင်-မင်း­တြားကြီးကိုခွင့်ပန်ပြီး၊ (၇)နှစ်ခန့်ကြာသည်အထိတိုက်ခိုက်ပြီး၊ အနုရာဓပူရထီးနန်းကို ပြန်­လည်­ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းသားသည် ‘ရမ္မနိကဒေ၀ီ’ကို မိဖုရားအရာထားလျှက် အနုရာဓပူရထီးနန်းကို အုပ်­ချုပ်­မင်းပြုပြီး၊ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသည့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို အထူးအလေးထားပြုပြင်ပြီး၊ စေတီ­တော­်ကြီးများ၊ ကျောင်းတိုက်အသစ်ကြီးများကို တည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်း­၏­လက်­ထက်တွင် နိုင်ငံတော်ကြီးမည်မျှအထိ ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့ကြောင်းကိုလည်း တည်ဆောက်­ထား­ခဲ့­သည့် ကျောင်းတိုက်ကြီးများ၊ စေတီတော်ကြီးများကို လေ့လာကြည့်လျင် သိမြင်နိုင်ပါသည်။
ဒုဋ္ဌဂါမဏိမင်းကြီးသည် (၂၄)နှစ်မျှနန်းစံခဲ့ပြီး၊ သက်တော်ကြီးရင့်၍ နတ်ရွာစံခဲ့ရပါသည်။ မင်းကြီးတွင် ထီးနန်းအမွေဆက်ခံရန် ‘သာလိယ’အမည်ရှိ သားတော်တစ်ပါးရှိသော်လည်း စဏ္ဍာလမျိုးနွယ် ‘အသောကာမာလာ’နှင့်ရည်ငံပြီး၊ နန်းတွင်းမှထွက်ပြေးသွားသောကြောင့် ညီတော်-­သဒ္ဓါတိဿမင်းသားမှ ဒုဋ္ဌဂါမဏိ­မင်း­­၏­အရိုက်အရာကို ဆက်ခံခဲ့ပါသည်။ သဒ္ဓါတိဿ­မင်း­ကြီး­နှင့် မိဖုရားခေါင်ကြီးတို့မှ-လဉ္ဇတိဿ၊ ထူလတ္ထန၊ ခဠာဋနာဂ နှင့် ၀ဋ္မဂါမဏိအဘယ-ဟူ­သော­သား­တော်(၄)ပါးကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ သဒ္ဓါတိ­ဿ­မင်းကြီး၏လက်ထက်တွင်လည်း မြတ်စွာဘုရား­ရှင်­၏­သာ­သနာတော်သည် သီရိလင်္ကာမြေအပြင်တွင် အထူးထွန်းပြောင် စည်ကားခဲ့ပါသည်။
သဒ္ဓါတိဿမင်းကြီး အသက်အရွယ်ကြီးရင့်၍ နတ်နန်းစံမြန်းချိန်တွင် သံဃာ့ရာဇာဆရာ­တော်­ကြီး­များ၊ အမတ်ကြီးများ၏သဘောဆန္ဒအရ သားတော်(၄)ပါးထဲမှ ဒုတိယသားတော်-‘ထူလတ္ထ­န­မင်း­သား’ကို မင်းမြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။ နန်းတက်ပြီး (၁)လ၊ (၁၀)ရက်အကြာမှာပင် ပထမသား­တော်­အ­ကြီး-လဉ္ဇတိဿမင်းသားမှနန်းလုပြီး ထီးနန်း­စိုး­စံ­ခဲ့ပါသည်။ လဉ္ဇတိဿမင်းနောက်တွင် ညီတော်­အလတ်-ခဠာဋနာဂမင်းသား နန်းမွေဆက်ခံပါသည်။ ခဠာဋနာဂမင်းကို ဘာသာခြား-စစ်သေနာပတိ အမတ်­ချုပ်­ဖြစ်­သူ-‘မဟာရတ္ထက’မှနန်းချပြီး၊ အာဏာလုယူခဲ့ပါသည်။
ညီတော်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည့် ၀ဋ္မဂါမဏိအဘယ (၀လဂမ္ဘ)မင်းသားသည် နောင်တော်အထံမှ လုယူပြီး၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုဖြက်ဆီးနေသည့် အမတ်မင်းထံမှထီးနန်းကို လူသူစုရုံးပြီး တိုက်ခိုက်­ရ­ယူ­နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၀တ္တဂါမဏိမင်းသားသည် ‘သောမ၀တီ’ နှင့် ‘အနုလဒေ၀ီ’တို့ကို မိဖုရားမြှောက်ပြီး ရာ­ဇ­အဘိသိက်ခံယူခဲ့ပါသည်။
၀ဋ္မဂါမဏိအဘယမင်း နန်းစံ၍ (၆)လခန့်အချိန်တွင် ဗြဟ္မဏတိဿသူပုန်ဘေး နှင့် ကျေး­မင်း­တို့­၏ သူပုန်ဘေးများဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ဘေးနှင့်အတူ ရောဂါဘေး၊ အငတ်ဘေးများပါ ၀င်ရောက်လာသောကြောင့်၊ မင်းကြီးသည် ထီးနန်းကိုစွန့်ပြီး၊ (၁၄)နှစ်ကြာမျှ တိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါ­သည်။ ထိုဘေးကြီးများအတွင်း စေတီတော်ကြီးများ၊ ကျောင်းတိုက်ကြီးများနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနိကအမွေ အကုန်နီးပါးမျှ အဖြတ်ဆီးခံခဲ့ရပါသည်။ သံဃာတော်များသည်လည်း စာပေပို့ချင်း၊ သင်ယူခြင်းအစရှိ သော သာသနာထိမ်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကိုမပြုနိုင်ကြတော့ဘဲ စစ်ဘေးလွတ်ရာဒေသများသို့ တိမ်း­ရှောင်နေခဲ့ကြရပါသည်။
၀ဋ္မဂါမဏိအဘယမင်းကြီးသည် လူသူစုဆောင်းရင်း ပုန်းအောင်းနေသည့်နေရာမှာ ဇမ္ဗု­ကော­လ (ခေါ်) ဒမ္ဘူလကျောက်တောင်တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်တောင်ကြီး၏ သဘာဝလှိုဏ်ဂူများထဲတွင် သံဃာတော်များ တရားအားထုတ်ခြင်း၊ စာပေသင်ယူခြင်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ပြုနေခဲ့ကြ­သည့်­နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ သံဃာတော်များသည် မင်းကြီးအား စောင့်ရှောက်ပေးထားပြီး၊ ထီးနန်းကို ပြန်လည်ရယူရန် စစ်သည်စုဆောင်းခြင်း၊ စစ်အတတ်သင်ခြင်းစသောအလုပ်များတွင် အထူးကူညီခဲ့ ကြပါသည်။
ဒမ္ဘူလကျောက်တောင်ပေါ်မှ သံဃာတော်များ၏ကျောင်းသင်္ခန်းလေးများတွင် မှီခိုပြီး၊ လိုအပ်­သော­စု­ဆောင်းမှုများပြည့်စုံသောအခါ ၀ဋ္မဂါမဏိအဘယမင်းသည် အနုရာဓပူရထီးနန်းကို ပြန်လည်­တိုက်­ခိုက်ပြီး၊ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
မင်းကြီးသည် တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေချိန်တွင် စေတနာ မေတ္တာကြီးမားစွာဖြင့် အကူအညီပေးခဲ့သည့် သံဃာတော်များကို အထူးကျေးဇူးဆပ်သောအားဖြင့် သံဃာတော်များသီတင်းသုံးတော်မူကြသည့် သဘာဝလိုဏ်ဂူငယ်လေးများကို နေလောက်­သည့်­ပ­မာ­ဏအထိ ပြုပြင်ပေးခြင်းများအပြင်၊ ဒမ္ဘူလလှိုဏ်ဂူကြီး(၅)ခုကို ပင်မကျောက်တောင်ကြီးမှထွင်းပြီး၊ လှူဒါန်း­ခဲ့­ပါသည်။ ထိုမျှမက ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အထူးအရေးပါသည့် စတုတ္ထသင်္ဂါ­ယနာ­တင်ပွဲကြီးကိုလည်း မင်းကြီးမှပင် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပြီး သာသနာပြုခဲ့ပါသည်။
၀ဋ္မဂါမဏိအဘယမင်းကြီးသည် ဒမ္ဘူလကျောက်လှိုဏ်ဂူများကို (B.C.1)ရာစုတွင် ထွင်း၍လှူခဲ့­သော­ကြောင့် ယ္ခုအခါနှစ်ပေါင်း (၂၂၀၀)ကျော် သက်တမ်းရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဒမ္ဘူလတောင်သို့ ကိုလံ­ဘို­မြို့တော်မှ ကီလိုမီတာ (၁၅၀)ကွာဝေးပါသည်၊ ကန္ဒီမြို့နှင့် ကီလိုမီတာ (၇၂) နှင့်၊ အနု­ရာ­ဓ­ပူ­ရ­မြို့­နှင့်­(၆၆)­ကီလိုမီတာ ကွာဝေးပါသည်၊၊
ဒမ္ဘူလကျောက်တောင်ကြီးသည် မီတာ(၁၅၂)ကျယ်ဝန်းသည့် ကျောက်တောင်ကုန်းဖြစ်ပြီး၊ အလျားမီတာ(၃၀၀) နှင့်၊ တောင်ခြေမှမီတာ (၃၇)မြင့်ပါသည်။ ဒမ္ဘူလလိုဏ်ဂူကြီး (၅)ခုမှာ-
ဒမ္ဘူလတောင်ပေါ်အ၀င်ဂိတ်ကို ဖြတ်ကျော်အပြီး ဘယ်ဘက်ကျောက်တောင်၏ အစတွင်­ကျောက်­စာတချပ်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊ ထိုကျောက်စာကို ‘နိဿင်္ကမလ္လမင်း’မှ (A.D. 1189-1198)တွင် ရေးထိုးခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်၊၊ မင်းကြီးသည် လိုဏ်ဂူကြီး(၅)လုံးအတွင်းမှ မူလက­သာ­မန်အတိုင်းတည်ရှိနေသည့် ဆင်းတုတော်ကြီးများကို ရွှေချပြီးလှူဒါန်းခဲ့ပြီး၊ ဒမ္ဘူလတောင်­ကို­လည်း ‘ဒမ္ဘူလရွှေကျောင်းတော်= Dambula, the Golden Rock Cave’ဟု အမည်သစ် ခေါ်­တွင်­စေ­ခဲ့ပါ­သည်။ ကျောက်စာထဲတွင် မင်းကြီး၏ ဒမ္ဘူလရွှေကျောင်းတော်ကြီးတွင် လှူဒါန်းမှုအစုစုနှင့်၊ တိုင်း­သူ­ပြည်­သားများအပေါ်တွင်ထားရှိသည့် သဘောထားများကိုရေးသားထားသည်ဟု သိရပါသည်။
ကျောက်စာချပ်ကြီး၏ ဘေးကပ်လျက်တွင် ပထမဆုံးလှိုဏ်ဂူဖြစ်သည့် ဒေ၀ရာဇလေဏကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ လှိုဏ်ဂူထဲတွင် အလွန်ကြီးသည့်လျောင်းတော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး ကိုဖူးတွေ့ရပါမည်၊ ဆင်းတုတော်ကြီး၏ ဦးခေါင်းတော်ဘေးတွင် ဗိဿနိုးနတ်ရုပ်တုကို တွေ့မြင်နိုင်ပြီး၊ ဆင်းတုတော်ကြီး၏ခြေရင်းတွင် အရှင်အာနန္ဒာ၏ရပ်တော်မူရုပ်တုနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင် ထိုင်တော်­မူ­ဆင်း­တုတို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လျောင်းတော်မူဆင်းတုတော်ကြီးသည် (၄၅)ပေ အလျားရှိ­သော­ကြောင့် ဆင်းတုတော်ကြီးနှင့်ယှဉ်ကြည့်လျင် လိုဏ်ဂူသည်အလွန်ကျဉ်းလွန်းနေပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပုဂံမှ ‘မနုဟာဘုရား’ ဂန္ဓကုဋိတိုက်နှင့် ဆင်တူလှပါသည်။ လိုဏ်ဂူနံရံတစ်ခုလုံးတွင်လည်း နံရံဆေးရေး­ပန်း­ချီများ ပြည့်နှက်နေပါသည်။
ဒမ္ဘူလလှိုဏ်ဂူများတွင်ရှိသော နံရံဆေးရေးပန်းချီများ သည် မူလကျောက်တောင်ကို လှိုဏ်­ဂူ­အ­ဖြစ်ထွင်းစဉ်ကပင် ရေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်၊ မူလပန်းချီများကို (A.D.18)ရာစုတွင် မူလလက်­ရာ­များ­ပေါ်­တွင် ပြန်လည်၍ပြုပြင်မှု ထိမ်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ဒမ္ဘူလဆင်းတု­တော်­ကြီး­များ­တွင်လည်း တချို့ ဆင်းတုတော်ကြီးများမှာ ကျောက်သားမဟုတ်ဘဲ၊ သစ်သားဆင်းတုတော်များ ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်၊ အချို့ ဆင်းတုတော်ကြီးများကမူ အင်္ဂတေသား ဆင်းတုတော်­များ­ဖြစ်­သည်­ဟု လေ့လာရပါသည်။ သို့သော် ဆင်းတုတော်ကြီးအများစုမှာမူ မူလကျောက်တောင်ကို ထွင်းစဉ်က­ကျောက်­တုန်းများကို ချန်ထားပြီး၊ ဆင်းတုတော်များအဖြစ် ထုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်း­တု­တော်ကြီးများကို လေ့လာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သီရိလင်္ကာလူ­မျိုးများသည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကျောက်­ဆစ်လက်ရာ အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြောင်း သိသာ­လှပါသည်။ ဒမ္ဘူလကျောက်­တောင်­မှ­ဆင်း­တု­တော­်များသည် သီရိလင်္ကာလူမျိုးတို့၏ အစောဆုံး ကျောက်ဆင်းတုလက်ရာကို ပြသရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒေ၀ရာဇလှိုဏ်ဂူဘေးတွင် ဗိဿနိုးနတ်ကွန်းကို တွေ့ရပါသည်၊ အတွင်းထဲမှ ဗိဿနိုးနတ်­ရုပ်­ကြီးကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ မာတရခရိုင်၊ ဒေ၀ုန္ဒရဒေသမှ (A.D-16)ရာစုတွင် သယ်ယူ­ထား­သည်ဟု လေ့လာရပါသည်။
ဤလှိုဏ်ဂူသည် ဒမ္ဘူလလိုဏ်ဂူများထဲတွင် အကြီးဆုံးလိုဏ်ဂူကြီး ဖြစ်ပါသည်၊ လိုဏ်ဂူ­ကြီး­သည် အရှည် (၃၇)မီတာ၊ အကျယ်(၂၃)မီတာနှင့် (၂၇)မီတာမြင့်ပါသည်၊ လိုဏ်ဂူတော်ကြီးထဲတွင် ဆင်း­­တုတော်ပေါင်း(၆၀) ရှိပါသည်။ အတွင်းပိုင်းမှကြည့်လျင် လိုဏ်ဂူတော်ကြီး၏ ညာဘက်­အ­၀င်­ဘေးတွင် ၀ဋ္မဂါမဏိအဘယမင်းကြီး၏ ရုပ်တုကို တွေ့ရပါမည်၊ ရုပ်တုကြီးကို ပေါလွန္နရု­၀­ခေတ်­တွင်မှထုလုပ်ပြီး ထည့်ထားသည်ဟု သိရပါသည်။
လှိုဏ်ဂူကြီးထဲတွင် ရပ်တော်မူ၊ ထိုင်တော်မူ၊ လျောင်းတော်မူ ဆင်းတုတော်ကြီးအမျိုးမျိုးကို မုဒြာဟန်အမျိုးမျိုးနှင့် ဖူးတွေ့ရပြီး၊ နတ်ရုပ်မျိုးစုံကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ စွယ်တော်ကြုပ်စေတီတော်­တစ်­ဆူကိုလည်း ဖူးတွေ့ရပါသည်၊ နံရံဆေးရေးပန်းချီများကို­လည်း နေရာမလပ်တွေ့မြင်ရပါသည်။ မဟာရာဇလိုဏ်ဂူသည် အကြီးဆုံးဖြစ်သည့်အားလျောက်စွာ လိုဏ်ဂူတော်ကြီးအတွင်းမှ ဆင်းတု­တော်­များသည်လည်း အခြားလိုဏ်ဂူများအထဲမှ ဆင်းတုတော်များထက် အဆများစွာကြီးသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ လိုဏ်ဂူကြီး၏အလယ်တွင် ကျောက်တောင်အပေါ်အမိုးမှ စိမ့်ကျနေသည့်­ရေ­ပေါက်­များကို ခံထားသည့်မြေအိုးကြီး ရှိပါသည်။ မြေအိုးထဲကျသည့်ရေများသည် အစွမ်းတမျိုး­မျိုး­ရှိ­သည်ဟု ဒေသခံလူမျိုးတို့က ယုံကြည်ကြပါသည်။
ဒေ၀ရာဇလှိုဏ်ဂူ၊ မဟာရာဇလှိုဏ်ဂူနှင့် အတွင်းရှိဆင်းတုတော်ကြီးများသည် မူလအတိုင်းပြု­ပြင်­မှု­မ­ရှိ­သေး­ဘဲ လေ့လာနိုင်သည့်လှိုဏ်ဂူ(၂)ခုဖြစ်ကြောင်း လေ့လာရပါသည်။
မဟာရာဇလှိုဏ်ဂူ၏ ဘယ်ဘက်ဘေးတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး ‘မဟာအတုလလိုဏ်ဂူ’ကို တွေ့ရ ပါမည်။ ဤလိုဏ်ဂူသည် အရှည်(၂၇)မီတာ၊ အကျယ်(၂၄)မီတာ နှင့် အမြင့်(၁၁)မီတာ ဖြစ်ပါသည်။ (A.D.18)ရာစုတွင် ကိတ္တိသီရိရာဇသိင်္ဃမင်းမှ ပြန်လည်၍အသစ်ပြုပြင် မွန်းမံထားသော­လိုဏ်­ဂူ­ဖြစ်သော ကြောင့် The Great New Cave ဟုခေါ်တွင်ပါသည်။ လိုဏ်ဂူတော်ကြီးအတွင်းသို့ ၀င်လျင်­၀င်ချင်း ထိုင်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးကို နံဘေးမှ ရပ်တော်မူဆင်းတုတော်နှစ်ဆူခြံရံလျက် ဖူးတွေ့ရ­မည်­ဖြစ်­ပါ­သည်။ လျောင်းတော်မူဆင်းတုတော်ကြီးတစ်ဆူကိုလည်း ဦးပိုင်းတွင် ဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရပ်တော်မူ၊ ထိုင်တော်မူဆင်းတုအမျိုးမျိုးကို ပုံဟန်အမျိုးမျိုးနှင့် ကြည်ညိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကန္ဒီခေတ်တွင် ပြုပြင်ထားသောလှိုဏ်ဂူကြီးဖြစ်သောကြောင့် ဆင်းတုတော်အများစုမှာ ကန္ဒီခေတ် လက်ရာလွှမ်းမိုးနေသည်ဟု သိရပါသည်။ နတ်ရုပ်တုများကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပြီး၊ နံရံဆေးရေး­ပန်း­ချီးများ­­မှာလည်း အကြားမလပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကိတ္တိသီရိရာဇသိင်္ဃမင်း၏ရုပ်တုကိုလည်း လှိုဏ်ဂူ­တော်­ကြီး၏ အရှေ့ ပိုင်း၊ ထိုင်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီး၏နံဘေးတွင် မုတ်ဆိပ်မွှေးကားကားနှင့် ရပ်­လျက်­အနေအထားဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
မဟာရာဇလှိုဏ်ဂူ၏ ဘယ်ဘက်ဘေး ဒေါင့်ကျကျနေရာတွင် ပစ္ဆိမလိုဏ်ဂူတည် ရှိပါသည်။ ဤ­လိုဏ်ဂူသည် ကျောက်တောင်ကြီး၏အကွေ့နေရာတွင် ထွင်းထားသောကြောင့် အခြားလိုဏ်­ဂူ­များထက် အနည်းငယ်ဆိုက်သေးပါသည်။ လိုဏ်ဂူထဲတွင် ထိုင်တော်မူဆင်းတုတော်ကြီးများနှင့် စေတီငယ်တစ်ဆူကို ဖူးတွေ့ရပါသည်၊ ထိုစေတီကို ၀ဋ္ဋဂါမဏိမင်း၏ ကြင်ဖက်သက်လျာ သောမ၀­တီမိ­ဖုရားမှ လှူဒါန်းထားသည်ဟု သိရပါသည်။ စေတီတော်လေးထဲတွင် သောမ၀တီမိဖုရား၏ လက်­၀က်­တန်းဆာ ရတနာများကို လှူဒါန်းဌာပနာထားသည်ဟုလည်း လေ့လာရပါသည်။ နံရံဆေး­ရေးပန်း­ချီ­များကိုလည်း နံရံအနှံ့တွေ့ရပါသည်။
အစွန်ဆုံးတွင်တွေ့ရမည့် လှိုဏ်ဂူသည် ဒေ၀နာတုလလှိုဏ်ဂူ ဖြစ်ပါသည်။ ဤလိုဏ်ဂူသည် ဒမ္ဘူလလိုဏ်ဂူတော်များထဲတွင် နောက်ဆုံးအသစ်ပြုပြင်ထားသည့် လိုဏ်ဂူဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ လိုဏ်ဂူထဲတွင် အလျား(၃၂)ပေခန့်ရှိ လျောင်းတော်မူဆင်းတုတော်ကြီးနှင့်၊ ရပ်တော်မူဆင်းတု­တော်များ၊ ထိုင်တော်မူဆင်းတုတော်အများအပြားကို တွေ့ရပါသည်။ နံရံဆေးရေးပန်းချီများကိုလည်း အခြားလှိုဏ်ဂူများနည်းတူ တွေ့မြင်ရပါသည်။
ဒမ္ဘူလကျောက်တောင်ကြီးပေါ်သို့ရောက်ရှိရန် ကျောက်လှေကားလမ်းဖြင့် မိနစ်(၃၀)ခန့် တက်ရပါသည်။ တောင်အောက်ခြေတွင် တရုပ်လူမျိုးများလှူဒါန်းထားသည့် ဧရာမကြီးမားသော ထိုင်­တော်မူ ရွှေချဆင်းတုတော်ကြီးကို ကြည်ညိုဖွယ်ဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရင်ပြင်တော်ဘေးတွင် (၂၄)­နာရီ­အသံလွှင့်နေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အသံလွှင့်ရုံကြီးကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဒမ္ဘူလနယ်­တ­၀ိုက်တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သမိုင်းမတင်မှီနှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀)ခန့်ကပင် သက်ရှိလူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့­သည့်­­အထောက်အထားများကို တူးဖော်တွေ့ရှိသောကြောင့် ဒမ္ဘူလတောင်သည် ရှေးအကျဆုံးသော သီရိလင်္ကာရှေးခေတ်လူမျိုးများ၏ နေရာဒေသဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမွေအနှစ်များတည်ရှိရာ နေရာအ­တော်­များများရှိပါသည်၊ အနုရာဓပူရမြို့၊ မဟိံတလေမြို့၊ ပေါလွန္နရုဝမြို့၊ ကန္ဒီမြို့၊ မဟိယင်္ဂဏမြို့၊ ကိုလံ­ဘို­မြို့၊ မာတရမြို့ နှင့် ဒမ္ဘူလမြို့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုမြို့များအထဲမှ ဒမ္ဘူလမြို့သည့် သီရိလင်္ကာလူမျိုး များ၏ အစောဆုံးကျောက်ဆင်းတု ကျောက်ဆစ်လက်ရာများနှင့် အစောဆုံးနံရံဆေးရေးပန်းချီ အနု­ပညာများကို လေ့လာဖူးတွေ့ ကြည်ညိုနိုင်သည့် နေရာ­ဖြစ်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်­သူ­တော်စဉ်များနှင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာရေး လေ့လာသူများအထူး သွားရောက်ပြီး လေ့လာရန်­သင့်­လျော်­သည့်­နေ­ရာဖြစ်ကြောင်း သတင်းစကားပါးလိုက်ရပါသည်။ ။
(ကျမ်းကိုး/ History of Buddhism in Ceylon. Walpola Rahula,The Pali Literature of Ceylon. G.P.Malalasekera, Sacred Island: A Buddhist Pilgrim’s Guide to Sri Lanka. Ven.S.Dhammika, Buddhism Culture and Sri Lanka Pilgrim’s Guide, Sri Lanka Pilgrim’s Notebook. Ashin Kevala, Dipavamsa.Hermann Oldenberg, Mahavamsa. Wilhelm Geiger.
Ph: 94 757171832
Posted by အလင်း စက် at 3:49 AM0comments
“မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်များ လေ့လာချက်”
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး၍ အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်သောအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်­တော်များ (၁၆)ပြည်(တစ်တင်း) ကျွင်းကျန်ခဲ့ပါသည်၊၊
စုစုပေါင်း (၇)ဆူသည် မူလပကတိအတိုင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်၊၊ ထို့ကြောင့် ပါဠိဝေါဟာရဖြင့် “အသမ္ဘိန္ဓ ဓာတ်တော်”ဟု ခေါ်ပါသည်၊၊ “အ၀ိပ္ပကိဏ္ဏဓာတ်တော်”ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်၊၊
ကျန်သည့်သွားတော် အံသွားတော်များအပါအ၀င် အရိုးတော်၊ အရေတော်နှင့် သွေးတော်၊ အသား­တော်များသည် မူလပုံစံပျက်ယွင်းပြီး၊ အသွင်ပြောင်းလျှက် ကျွင်းကျန်ခဲ့ပါသည်၊၊ မူလပုံစံပျောက်ပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ဓာတ်တော်များကို “၀ိပ္ပကိဏ္ဏဓာတ်တော်”ဟု ခေါ်ပါသည်၊၊
ဓာတ်တော်(16)ပြည်ထဲမှ (၁၄)ပြည်သည် လူ့ပြည်တွင် တည်ရှိပါသည်၊၊ ကျန်(၂)ပြည်သည် နဂါး­ပြည်၊ “ရာမရွာ”တွင် “ဇယသေန-နဂါးမင်း”သည်ဆောင်ယူပြီး၊ ပူဇော်ထားပါသည်၊၊
မူလပုံစံမှပြောင်းလဲပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ဓာတ်များသည် ပုံစံအရွယ်အစား(၃)မျိုးကွဲပြီး၊ ဓာတ်တော်­များ­အ­ဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်၊၊
(1) မုန်ညှင်းစေ့ပမာဏ ဓာတ်တော်(အသေးဆုံးအရွယ်)၊
(2) ဆန်ကြိုးစေ့ပမာဏ ဓာတ်တော်(အလတ်စားအရွယ်)၊
(3) ပဲနောက်စေ့အချမ်းပမာဏ ဓာတ်တော်(အကြီးစားအရွယ်)၊ တို့ဖြစ်ကြပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်များသည် အရောင်မတူကြပါ၊ ဓာတ်တော်များသည် အရောင်(၃)မျိုး ကွဲပြားလျှက် ကျွင်းကျန်ခဲ့ကြပါသည်၊၊ အရောင်များမှာ--
(1) ရွှေရောင် (သုဝဏ ၀ဏ)၊
(2) ပုလဲရောင် (မုတ္တသဒိသာ)၊
(3) နီသွေးသွေးအရောင်, မြတ်လေးပန်းအငုံရောင် (သုမန မကုလသဒိသာ)၊ တို့ဖြစ်ကြပါသည်၊၊
စွယ်တော်(၄)ဆူသည် ပကတိအတိုင်းကျန်ရစ်ခဲ့သည့် အထူးဓာတ်တော်များဖြစ်ပါသည်၊၊ ယနေ့တိုင် တည်­ရှိဆဲဖြစ်ပါသည်၊၊ စွယ်တော်မြတ်(၂)ဆူသည် လူ့ပြည်တွင်တည်ရှိပြီး၊ ကျန်စွယ်တော်(၂)ဆူမှ (၁)ဆူသည် သိကြားမင်းမှ ဆောင်ယူပြီး “တာဝတိံသာနတ်ပြည်”၊ “စူဠာမဏိစေတီ”တွင် ဌာပနာ­ထား­ပါ­သည်၊၊ (၁)ဆူကိုမူ “ဇယ­သေ­န­-နဂါးမင်း”မှဆောင်ယူပြီး၊ နဂါးပြည်တွင် ပူဇော်ထားပါသည်၊၊
(1) အထက်လက်ယာ၊ (ညာဘက်အထက်) စွယ်တော်မြတ်သည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်တွင် တည်­­ရှိ­ပါသည်၊
(2) အောက်လက်ယာ၊ (ညာဘက်အောက်) စွယ်တော်မြတ်သည် နဂါးပြည်တွင် တည်­ရှိ­ပါ­သည်၊၊
(3) အထက်လက်ဝဲ၊ (ဘယ်ဘက်အထက်) စွယ်တော်မြတ်သည် ဂန္ဓာရတိုင်း (တရုပ်ပြည်)­တွင် တည်ရှိပါသည်၊
(4) အောက်လက်ဝဲ၊ (ဘယ်ဘက်အောက်) စွယ်တော်မြတ်သည် ကလိင်္ဂတိုင်း၊ အိန္ဒိယ­တောင်­ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်၊၊
သာသနာဝင်ကျမ်းများအလိုအရ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဘယ်ဘက်အထက်ပိုင်း စွယ်တော်မြတ်သည် “ဂန္ဓာ­­ရတိုင်း”တွင် တည်ရှိပါသည်၊၊ ဂန္ဓာရတိုင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အနောက် မြောက်ဘက်၊ “ကက်­ရှ­မီး­ယားနိုင်ငံ”တွင် တည်ရှိပါ­သည်၊ အ­နောက်­ပါကစ်စတန်နှင့် နယ်ခြင်းစပ်နေပါသည်၊ တူရ­ကီ­နိုင်­ငံ­နှင့်­လည်း အလွန်နီးပါသည်၊၊ “ဗုဒ္ဓသာ­­သ­နိ­­က­­ပဌ၀­ီဝင်ကျမ်း”အလိုအရ “ဂန္ဓာရတိုင်း”သည် “ကက်ရှ­မီး­ယား”­နှင့် တစ်စပ်တည်းတည်­ရှိ­သည်ဟု ဆို­ပါသည်၊၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဂန္ဓာရတိုင်းသည် ကက်ရှ­မီယား­နိုင်­ငံထဲတွင်တည်ရှိသည်ဟု ဖြစ်­ပါသည်၊၊
တရုပ်ပြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် ဂန္ဓာရတိုင်းသည် တရုပ်ပြည် မ­ဟုတ်­ကြောင်း သိသာပါသည်၊၊ သို့သော် မြတ်စွာဘုရား၏စွယ်တော်တစ်ဆူသည် ဂန္ဓာရတိုင်း၊ လက်ရှိ ကက်ရှမီးယားနိုင်ငံမှ တနည်းနည်းဖြင့် တရုပ်ပြည်(စိန့်တိုင်း)သို့ ရောက်ရှိသွားဟန်ရှိပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ လက်ထက်တော်က တရုပ်ပြည်ကို “စိနရဋ္ဌ=စိန့်တိုင်း”ဟုခေါ်ပါသည်၊၊ ကြွေထည်- လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးကြသောကြောင့် “စိနရဋ္ဌ”ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ (စိန=ရွှံ့ ၊ ကြွေ)၊၊ ဂန္ဓာ­ရ­တိုင်း­နှင့် စိန­ရဋ္ဌတို့သည် သီးခြားစီဖြစ်သောကြောင့် တရုပ်ပြည်သည် ယခင်က “စိနရဌ=စိန့်တိုင်း” မဖြစ်နိုင်­­ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်စဉ်က ရဟန္တာမထေရ်တပါးမှ ဘယ်ဘက်­အ­ထက်­ပိုင်း စွယ်တော်မြတ်ကို မီးပုံအတွင်းမှ ယူတော်မူပြီး၊ ဂန္ဓာရတိုင်း၏မင်း­ထံ­သို့­ကိုးကွယ်ရန် ပေးအပ်­ခဲ့­ပါ­သည်၊၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းတချို့တွင်­မူ တရုပ်ပြည်နယ်စပ် “ရှေး­ဟောင်း­စေ­တီ­အပျက်ကြီးတစ်ဆူ”အထဲမှ ဘာ­သာစကား(၃)မျိုးနှင့် ကမ္ဗည်း­ထိုးထားသည့် စွယ်တော်အစစ်ကို တရုပ်လူမျိုးများက ရရှိထားခြင်း­ဖြစ်­သည်ဟု ဆိုပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်စဉ် “ရဟန္တာ-အရှင်ခေမာ”မှ မီးပုံအတွင်းမှ “ဘယ်­ဘက်၊ အောက်ပိုင်းစွယ်တော်မြတ်”ကို တန်ခိုးတော်ဖြင့်ဆောင်ယူပြီး ကလိင်္ဂ­တိုင်း၊ “ဗြဟ္မဒတ္တမင်း”ထံ­သို့­ကိုး­ကွယ်ရန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ဘယ်ဘက်၊ အောက်ပိုင်းစွယ်တော်မြတ်”သည် မူလက “ကလိင်္ဂတိုင်း”တွင် တည်­­ရှိပါသည်၊၊ ကလိင်္ဂတိုင်းသည် လက်ရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၊ “ဘုံဘေမြို့”၏ အရှေ့­ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူအပြီး၊ နှစ်ပေါင်း (၆၃၀)ခန့် ကြာသောအခါ “ကလိင်္ဂတိုင်း”ကို “ဂုဟသီဝမင်း” အုပ်ချုပ်ပါသည်၊၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အလွန်အားနည်းသည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်၊၊ ဂုဟသီဝ­မင်း­ကြီး­သည် “စစ်ဖြစ်၍ ကျရှုံးခဲ့လျင် စွယ်တော်မြတ်ကို လျို့ဝှက်ယူဆောင်ပြီး၊ သီဟိုဠ်ကျွန်း သို့ထွက်­ပြေး­ရန်”­ သ္မီးတော်-ဟေမမာလာအား မှာကြားထားပါသည်၊၊
“ဟေမမာလာမင်းသမီး”သည် ကြင်ယာတော်-ဒန္တမင်းသားနှင့်အတူ ခမည်းတော်မင်းကြီးမှာကြားသည့် အတိုင်း သီဟိုဠ်ကျွန်းသို့ စွယ်တော်မြတ်အား ဆံထုံးကြားတွင်ဝှက်ယူလာပြီး၊ “သီရိမေဃ၀ဏ္ဏမင်း” အား­ဆက်သခဲ့ပါသည်၊၊ ဤသို့သောနည်းဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ဘယ်ဘက်၊ အောက်ပိုင်းစွယ်တော် မြတ်­”သည် သီဟိုဠ်ကျွန်း (သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၊ ယနေ့တိုင် အများပြည်သူတို့ ဖူးမျှော် ကြည­်ညိုနိုင်ပါသည်၊၊
ညှပ်ရိုးတော်(၂)ဆူမှ “ညာဘက်ညှပ်ရိုးတော်”သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ “ထူပါရာမစေတီ”တွင် ဌာ­ပ­နာ­­ထား­ပြီး၊ ယနေ့တိုင်စေတီတော်ကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုနိုင်ပါသည်၊၊ (B.C.2)ရာစုတွင် သီရိ­လင်္ကာ­နိုင်­ငံသို့ မြတ်­စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်စတင်ရောက်ရှိပါသည်၊၊ ပထမဆုံး သာသနာပြုမင်း­ဖြစ်­သော “ဒေ­၀ါ­နံပီယတိဿမင်း”သည် ထူပါရာမစေတီကို တည်ပြီးသောအခါ “အရှင်မဟိန္ဒမထေရ်”အား မြတ်­­စွာ­ဘု­ရားရှင်၏ ဓာတ်တော်အစစ်ရလိုကြောင်း လျောက်ထားပါသည်၊၊
ရဟန္တာဖြစ်တော်မူသော “အရှင်မဟိန္ဒ”သည် တူတော်အရင်း ရဟန္တာ-ကိုရင်သုမနအား တာဝတိံသာ နတ်­ပြည်၊ သိကြားမင်းထံမှ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဓာတ်တော်ပင့်ဆောင်ရန် စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်၊၊ “သုမန­သာ­မဏေ”သည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်၊ သိကြားမင်းထံကြွပြီး၊ ဓာတ်တော်အလှူခံသောအခါ “သိ­ကြား­မင်း”သည် “ညာဘက်ညှပ်ရိုးတော်”ကို လှူဒါန်းလိုက်ပါသည်၊၊
အဘိုး-သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးထံမှ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဓာတ်တော်များနှင့်အတူ “ညှပ်ရိုးတော်”ကို “ဒေ၀ါနံ­ပီယတိဿမင်း”ထံပေးအပ်ခဲ့ပါသည်၊၊ မင်းကြီးသည် ညှပ်ရိုးတော်နှင့် အခြားသောဓာတ်တော် များကို “ထူပါရာမစေတီ”ကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊
ဓာတုဝင်ကျမ်းများအလိုအရ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ကျန်သော “ဘယ်ဘက်ညှပ်ရိုးတော်”သည် “ဗြဟ္မ­ပြည်”တွင် တည်ရှိသည်ဟု လေ့လာရပါသည်၊၊ အချို့က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ “မဟိယင်္ဂဏ­စေ­တီ”­တွင် “ဘယ်­ဘက်­ညှပ်ရိုးတော်” တည်ရှိသည်ဟု ဆိုကြပါသည်၊ မမှန်ပါ၊၊ မဟိယင်္ဂဏစေတီတွင် မြတ်­စွာ­­ဘု­ရားရှင်၏ “လည်ရိုးတော်”ကို ဌာပနာထားကြောင်း “မဟာဝံသကျမ်း”တွင် “ဂီဝဋ္ဌိံ”ဟု အတိအကျ­ဖော်­­­ပြ­­ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်၊၊ ဂီဝါ-ပုဒ်သည် “လည်ပင်း”ဟု ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်၊၊ “ဂီဝဋ္ဌိံ”ဟု “မ­ဟာဝံသကျမ်း”တွင် ဖော်ပြထားသောကြောင့် “လည်ပင်းရိုး”ကို ဌာပနာထားကြောင်း သိရပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် သီရိလင်္ကာသို့ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က သုံးကြိမ်တိုင် ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်၊ အနာဂတ်အချိန်ကာလတွင် သာသနာတော်စည်ပင် ပြန့်ပွားမည့်­ဒေ­သ­ဖြစ်­ကြောင်း သိမြင်တော်မူ­သော­­ကြောင့် စစ်တိုက်နေသော ဘီလူးများ၏အလယ် ကောင်းကင်ထက်တွင် ရပ်­တော်မူလျှက် ဘီ­လူး­များအား စစ်ပြေငြိမ်းစေတော်မူပြီး၊ တရားတော်များ ဟော­ကြားတော်­မူ­ခဲ့­ပါ­သည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင် တရားဟော်တော်မူသည့် ပလ္လင်တော်နှင့်၊ ဆံ­တော်­များကို ဌာပနာပြီး၊ “မဟာသုမန-နတ်မင်း”မှ မဟိယင်္ဂဏစေတီကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်­ပါ­သည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံအပြီး အလောင်းတော်ကို တေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းစဉ် “ရဟန္တာ-သရ­ဘူ­­မထေရ်”မှ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “လည်ရိုးတော်”ကို မီးပုံအတွင်းမှတန်ခိုးတော်ဖြင့် ဆောင်ယူလာပြီး၊ “မဟိယင်္ဂဏစေတီ”အထဲတွင် ထပ်မံထည့်သွင်းဌာပနာထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊
“နလာဋဓာတုဝံသကျမ်း”အလိုအရ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “နှဖူးသင်းကျစ်တော်”ကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ ရောဟနဒေသတွင်ရှိသော “တိဿမဟာရာမစေတီတော်”တွင် ဌာပနာထားသည်ဟု လေ့­လာ­ရပါသည်၊၊
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်များအားလုံးကို သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးသည် မူလဓာတ်ပေါင်းချုပ် စေတီတော်ကြီးထဲမှ ထုပ်ဆောင်ပြီး၊ အိန္ဒိယတွင် စေတီတော်ပေါင်း(၈၄၀၀၀)နှင့်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ မြောက်များစွာသော စေတီတော်များအထဲတွင်ဌာပနာခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်၊၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ သာသနာပြုကြွလာသည့် “အရှင်မဟိန္ဒ၊ သင်္ဃမိတ္တာထေရီ”တို့သည် သီရိဓမ္မာ­သော­က­မင်းကြီး၏ သားတော်နှင့် သ္မီးတော်အရင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ မင်းကြီးသည် သားတော်နှင့် သ္မီးတော်­တို့­မှ­တ­ဆင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ဓာတ်တော်များကို နေရာအနှံ့စေတီတော်ကြီးများအထဲတွင် လှူ­ဒါန်း­­ဌာ­ပနာခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် သာသနာတော်စတင်ရောက်သည့်အချိန်မှစတင်ပြီး၊ ယနေ့တိုင် သာ­သ­နာအ­ဆက်မပျတ်ခဲ့သောကြောင့် သမိုင်းကျမ်းများအတိအကျကျန်ရှိပြီး၊ စေတီတော်ကြီးများမှာ­လည်း ဌာပ­န­ာထားသည့်ဓာတ်တော်အမည်များနှင့်အတူ အခိုင်အမာသိရခြင်း ဖြစ်­ပါ­သည်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွယ်တော်စေတီများ တည်ထားကိုးကွယ်ကြပါသည်၊ ထိုစေတီတော်များတွင် ဌာ­ပ­နာ­သည့် စွယ်တော်များမှာ “သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ-စွယ်တော်”နှင့် “တရုပ်ပြည်-စွယ်တော်”တို့မှ ပွားယူပြီး၊ တည်­ထား­­ကိုး­ကွယ်­ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ “စွယ်တော်ပွား”ဟု ခေါ်ကြပါသည်၊၊
အနှစ်ချုပ်သုံးသပ်လျင် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ မပျက်မစီးဘဲ မူလအတိုင်းတည်ရှိသည့် ဓာတ်တော်(၇)မျိုး မှ “စွယ်တော်တစ်ဆူ၊ ညှပ်ရိုးတော်တစ်ဆူ၊ နှဖူးသင်းကျစ်တော်တစ်ဆူ”တို့သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ကိန်းဝပ်စံတော်မူလျက်ရှိပါသည်၊၊ အခြားသော ဓာတ်တော်မြောက်များစွာတို့သည်လည်း သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူလျှက်ရှိကြောင်း သမိုင်းကျမ်းအထောက်အထား အခိုင်အမာဖြင့် သိရ ပါသည်၊၊
ပါဠိမှတ်တမ်းတင် သမိုင်းကျမ်းအထောက်အထားအတိအကျဖြင့် တန်ခိုးကြီးစေတီတော်ကြီးများကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်---
(1) စွယ်တော် (ကန္ဒီမြို့)၊
(2) ညှပ်ရိုးတော်-ထူပါရာမစေတီ (အနုရာဓပူရမြို့)၊
(3) မဟာဗောဓိပင် (အနုရာဓပူရမြို့)၊
(4) နှဖူးသင်းကျစ်တော်-တိဿမဟာရာမစေတီ (ကိုလံဘိုတောင်ပိုင်း၊ ရောဟနဒေသ)၊
(5) လည်ရိုးတော်-မဟိယင်္ဂဏစေတီ (မဟိယင်္ဂဏမြို့)၊
(6) လင်းလွန်းပင်စေတီ-ရာဇာရတနစေတီ (နာဂဒီပ၊ ဂျဖ္ဖနာမြို့)၊
(7) ကလျာဏီစေတီ (ကိုလံဘိုမြို့)၊
(8) ခြေတော်ရာတောင် (စရီပါဒ)၊၊
ဖော်ပြခဲ့သည့် အထင်ကရဓာတ်တော်များ တည်ရှိရာနေရာ(၈)ခုသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စဉ်များ လာရောက် ဖူးမျှော်ကြည်ညိုသင့်လှပါသည်၊၊ အခြားသောထူးခြားသည့် ဆင်းတုတော်ကြီးများ၊ သမိုင်း­၀င်နေရာများ၊ ဧရာမကြီးများသည့် စေတီတော်ကြီးများလည်း အလွန်များပြားစွာ တည်ရှိပါသည်၊၊ (၉)­ရက်­ခန့် အချိန်ယူဖူးမျှော်လျင် ဖော်ပြပြီးနေရာအားလုံးနီးပါး ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်၊၊
(သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဘုရားဖူးသူတော်စဉ်များနှင့် အများပြည်သူများအတွက် ယ္ခုစာတမ်းငယ်ကို ရေးသား တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊ အမှားတွေ့ရှိလျင် အပြစ်မတင်ဘဲ အကြံပြုဆွေးနွေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ် ပါသည်၊၊)
မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အခြားသောနိုင်ငံပေါင်းများစွာမှ ဘုရားဖူးများဖြင့် ရာသီမပျတ်စည်ကားနေသည့် အိန္ဒိယ­သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှ ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သော လင်္ကာဒီပကျွန်း၊ သီဟိုဠ်ကျွန်း၊ တမ္ဗပဏ္ဏိ ကျွန်းဟု အမည်အမျိုးမျိုးခေါ်သော သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စဉ်များအတွက် အ­ထူး­လာရောက်သင့်သည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလျှက် စာတမ်းကိုအဆုံးသတ် လိုက်­ရပါ­သည်၊၊ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ..၊၊ ၊၊
[ကျမ်းကိုး/ ပါရာဇိကဏ္ဍအဋ္ဌကထာ၊ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၊ ဒီဃနိကာယ်၊ ဗုဒ္ဓ၀ံသပါဠိ၊ မဟာဝံသ၊ ထူပ၀ံသ၊ ဒီပ၀ံသ၊ နလာဋဓာတုဝံသ၊ ဓာတုဝံသ၊ ဒါဌာဝံသ၊ သမန္တစက္ခုဒီပနီကျမ်း-ပံ-၂၉၆၊ ဗုဒ္ဓသာ­သ­နိ­က­ပဌ၀ီဝင်ကျမ်း-တောင်ပေါက်ဆရာတော်၊ ဗုဒ္ဓ၏ သီရိလင်္ကာခရီး-အရှင်ကေလာသ၊ ဓာတုဝိဘဇန­သုတ်၊ သီတဂူဆရာတော်၊၊ Pāli Proper Names By G.P. Malalasekera, Vo. I-II]
B.A, M.A (Buddhism)
University of BPU, Sri Lanka
Posted by အလင်း စက် at 11:27 AM0comments